ईन्सपेक्टरको १८ बर्षसम्म बढुवा जाम, आईजीपी हाेइन टीके एसपी हुनपनि समस्या - नेपालबहस
ईन्सपेक्टरको १८ बर्षसम्म बढुवा जाम, आईजीपी हाेइन टीके एसपी हुनपनि समस्या
| १४:०४:२४ मा प्रकाशित
२२ जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलभित्र लामो समयदेखि वृत्ति विकासमा झमेला हुँदा फ्रेसमा भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षकहरु १८ वर्ष पुग्दा पनि बढुवा हुन सकेका छैनन् । माथिल्लो तहमा लामो समयदेखि बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्दा ‘फ्रेस’ मा भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षकहरुको १८ बर्षसम्म बढुवा नहुने अवस्था आएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरुलाई भावी महानिरीक्षक (आईजीपी)को रुपमा हेरिने भएपनि समयमै वृत्तिविकास नहुँदा एक तहमाथिको बढुवा हुन नै जागिरे जीवनको आधा भन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरु बढुवा हुनुभन्दा पेन्सन पकाएर घर जान तयार हुन थालेका छन् । जबकी उनीहरुको पेन्सन २० वर्षमै पाक्ने गर्छ । उनीहरुको पेन्सन पाक्ने र बढुवा हुने अवस्था एकै साथ आउने भएकाले प्रहरी निरीक्षकका लागि सशस्त्र प्रहरीमा खासै आकर्षण छैन् ।
‘हामी लामो अन्यौलमा रहेका छौं जागिरको उत्तराद्र्धमा डीएसपीबाटै घर जानुपर्ने अवस्था आउँदैछ, लामो समयदेखि वृत्तिविकासमा परेको असरले सेवामा रहिरहने कि राजीनामा दिने भने दोधारमा छौं’, सशस्त्र प्रहरीका एक प्रहरी निरीक्षकले भने । सशस्त्रको यसअघि नेतृत्वमा रहेका आईजीपीहरुले उचित समयमा उचित निर्णय लिन नसक्दा यो अवस्था आएको हो ।
सशस्त्रमा हाल डीएसपीदेखि नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सम्म १०५ पद रिक्त रहेपनि बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्याल बढुवा प्रक्रिया आफनै समयमा हुने गरेको बताउँछन् । ‘ कति कति समयमा बढुवा हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रोमा सबैलाई थाहा छ तर बढुवा प्रकृया अघि बढे–नबढेको विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।
नेपाल प्रहरीमा सहायक निरीक्षक (असई) र नायव निरीक्षक (सई) मा भर्ना भएर सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भई आएका अधिकृतहरु उपरीक्षक (एसपी), वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बनिसक्दा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत ‘फ्रेस’मा इन्सपेक्टर भएकाहरु १८ वर्ष कटिसक्दा पनि अहिलेसम्म बढुवा हुन सकेका छैनन् ।
२०५८ सालमा नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकमा भर्ना भएका सईहरु अबको बढुवामा डीआईजी बन्नेछन् । उनीहरु डीआईजी बनेपछि पनि वरिष्ठ एसएसपीमा प्रहरीका प्राविधिक सई नै हुनेछन् । अर्को बढुवामा तिनीहरु नै डीआईजी हुनेछन् । सेवा अवधि बढी नै बाँकी रहेकाले उनीहरु अझै सो पदभन्दा माथि पुग्नेछन् । यो फाइदा लिनेमा हालका एसएसपीहरु कालीदास धौबजी, कुमार न्यौपाने, विदूर खड्का, प्रदीपकुमार पाल, लक्ष्मणबहादुर सिंह, कृष्णराज पाठकलगायत छन् । यद्यपि खड्काको भने सेवा अवधि अब साढे दुई वर्ष मात्र बाँकी छ ।
नेपाल प्रहरीमा उनीहरुसँगै भर्ना भएकाहरु भने अहिले पनि इन्सपेक्टर र डीएसपी छन् । नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा स्थानान्तरण हुँदा प्राविधिकलाई पनि गैरप्राविधिक (इन्फेन्ट्री) मानिएकाले उनीहरुलाई यस्तो अवसर मिलेपछि सशस्त्रमै करियर बनाउँछु भन्ने नयाँलाई घाटा भएको हो । नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबाट स्थानान्तरण भई गएकाहरुले राम्रो अवसर पाए पनि सशस्त्रमै खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रवेश गरेकाहरु भने टाउकोमा हात लगाएर बसेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी गठन भएपछि नेपाल प्रहरीबाट ९ हजार ८ सय १४ र नेपाली सेनाबाट एक सय २० जना सशस्त्रमा स्थान्तरण भएका थिए । त्यस्तै करारमा दुई हजार ५० जनालाई लिइएको थियो । सशस्त्रमा नेपाली सेनाबाट आएका अब डीआईजी सीपी गौतम मात्रै छन् । उनी हाल प्रदेश २ को प्रमुख छन् ।
सशस्त्रमा हाल आईजीपी एक, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दुई, डीआईजी, १६, एसएसपी २६, एसपी ८७, डीएसपी तीन सय ६० र इन्सपेक्टर ९४० को दरबन्दी रहेको छ । माथिल्ला तहमा दरबन्दी कम र नेपाल प्रहरीबाट आएकाहरुले लामो समयसम्म ठाउँ ओगटिरहेका छन् । उनीहरुले ठाउँ ओगट्दा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरुले समयमै बढूवाको अवसर नपाएका हुन् ।
३७ हजार एक सय १९ दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरीमा यसअघि एआईजी ६ र डीआईजी १८ रहने व्यवस्था थियो । तीन वर्षअघि एआईजी दुई र डीआईजी १६ बनाइयो । सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकृतहरु एआईजीको संख्या कम भएकाले कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको बताउन थालेपनि त्यो यथार्थ होइन । नेपाल प्रहरीबाट आएकाहरुले पदावधि सकिदा पनि पदावधि थप्न लविङ गरेकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
अहिलेको स्थिति हेर्दा दरबन्दी थप नभएको अवस्थामा पाँचवटा ब्याचका कतिपय अधिकृतहरु एसपी र एसएसपी पनि बन्न सक्ने देखिदैन । सिसं ३ देखि सिसं ७ का अधिकांश अधिकृतहरु डीएसपी र एसपीमै अवकाशमा जाने देखिन्छ । सिसं १ र २ का अधिकृतहरु भने नेतृत्वदायी तहमा पुग्ने छन् । २६ कात्तिक २०५९ मा इन्सपेक्टर भएका सिसं १ का ९ जना अहिले कायममुकायम एसएसपी छन् । उनीहरुभन्दा पाँच महिनापछि ७ चैत २०५९ मा भर्ना भएकाहरु सबै जना एसपी भइसकेका छन् । जसमध्ये अब आठ जना कामु एसएसपी बन्नेछन् ।
सिसं २ भन्दा ५ महिनापछि २९ साउन २०६० मा भर्ना भएका सिसं ३ का अधिकृतहरु कहिले एसपी बन्ने हुन ? कुनै ठेगान छैन । सिसं ३ मा ९६ जना पास आउट भए पनि अहिले ९० जना कार्यरत छन् । उनीहरु सेवामा प्रवेश गरेको नै १८ वर्ष पुगिसकेको छ । सशस्त्र प्रहरीमा हाल रिक्त एसपीको संख्या ३५ छ । तर नेपाल प्रहरीबाट स्थानान्तरण भई आएका उनीहरुभन्दा सिनियर डीएसपीको संख्या ५८ छ । हाल सशस्त्रमा सिसं ५ सम्मका इन्सपेक्टर डीएसपी भइसकेका छन् । सिसं ४ मा ९७ र सिसं ५ मा ८९ जना सेवा प्रवेश गरेका थिए ।
अबको पालो सिसं ६ को हो । २१ फागुन २०६२ मा फ्रेसमा भर्ना भएका सिसं ६ का इन्सपेक्टरहरु १६ वर्ष लागिसक्दा पनि डीएसपी हुन सकेका छैनन् । हाल सशस्त्रमा रिक्त डीएसपी पद संख्या ६० छ । सिसं ६ मा एक सय १ जना सेवा प्रवेश गरेको भएपनि हाल ९३ जना कार्यरत छ । उनीहरु सबैजना अहिले बढुवामा पर्ने छैनन् ।
जबकि नेपाल प्रहरीमा उनीहरुसँगै इन्सपेक्टरमा भर्ना भएकाहरु डीएसपी भएकै पाँच वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । सशस्त्रका अवकाशप्राप्त एक उच्च अधिकारीका अनुसार, सिसं ६ भन्दा सिसं ७ मा भर्ना भएका इन्सपेक्टर बढी मारमा पर्नेछन् । ६ असार २०६४ मा इन्सपेक्टर बनेको सो व्याचका एक सय ३१ जना छन् । सो ब्याचका कतिपय इन्सपेक्टरहरु २८ वर्षपछि मात्र डीएसपी बन्नेछन् । उनीहरु टीके एसपी पनि बन्ने छैनन् ।
दशगजा क्षेत्रबाट आठ लाख नगद बरामद २ दिन पहिले
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता बढ्याे २ हप्ता पहिले
आजदेखि महिला भलिबल टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु २ मिनेट पहिले
मनाङेको अभिव्यक्तिप्रति राखेपको गम्भीर ध्यानाकर्षण, कारबाहीको माग ५ मिनेट पहिले
१९ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न जीवन विकास लघुवित्तले पायो अनुमति ६ मिनेट पहिले
पहिरोका कारण पर्वत–बागलुङ खण्ड गए रातिदेखि अवरुद्ध १५ मिनेट पहिले
स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन जिल्ला सभापतिहरूको माग ३३ मिनेट पहिले
आज जयतु संस्कृतम्को हीरक जयन्ती मनाइँदै ३६ मिनेट पहिले
चितवनमा निषेधाज्ञाको समयमा ७८ कैदीबन्दी थपिए ४२ मिनेट पहिले
नहरमा बालुवा थुप्रिँदा विद्युत् सेवा अवरुद्ध ४६ मिनेट पहिले
लगातारको पानीले धेरै नदी तथा खोलामा बाढी: सतर्कता अपनाउन आग्रह ५२ मिनेट पहिले
भारतले महाकाली थुनेर सडक बनाउँदा नेपालको बाटोमा क्षति १७ घण्टा पहिले
आज थप ४,३४४ जनामा कोरोना पुष्टि, ८१ संक्रमितको मृत्यु ६ दिन पहिले
कोरोनाले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण प्रभावित ५ दिन पहिले
नेपालको उच्च शिक्षा गुणस्तर सुधारका लागि विश्व बैंकले ७ अर्ब दिने २ दिन पहिले
चितवनमा मापदण्डमा परेकालाई खोप लगाइदिन दबाव ७ दिन पहिले
बौद्धबाट तास खेल्दै गरेका १४ जना जुवाडे पक्राउ ३ हप्ता पहिले
औषधि लिएर संक्रमितका घरमा पुग्छन स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधि ३ हप्ता पहिले
सुत्नको लागि शिरानी उपयुक्त दिशामा हुन जरुरी ६ महिना पहिले
शिवम सिमेण्ट्सले आजको बजार तताउँदा, अरु के भयो ? १ वर्ष पहिले
आलु उत्पादन पचास प्रतिशत ह्रास, किसान चिन्तामा १० महिना पहिले
रुकूमपूर्वमा ‘पीपीई’ र थर्मल गनसहित थप स्वास्थ्य सामग्री १ वर्ष पहिले